Teknolojia · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Aogositra, 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Aogositra 2018
Andron'ny Hetsika Ho An'ny Bilaogy 2008, Mitoraka Bilaogy Momba Ny Fahantrana Ny Afrikana
Afrika Atsimo25 Aogositra 2018
Andro natao hanokanan'ireo mpitoraka bilaogy maneran-tany tena ho aminà lohahevitra iray manokana amin'ny bilaoginy tsirairay avy ny BlogActionDay (Andron'ny Hetsika Ho an'ny bilaogy ; amin'ny teny anglisy). Ny fahantrana no lohahevitra amin'ity 2008 ity. Manoratra izay heveriny hampihenàna ny fahantrana aty Afrika ny mpitoraka bilaogy tsirairay.
Afrika Atsimo : Ity no “Joule”, Fiara Afrikàna Voalohany Mandeha Amin'ny Herinaratra
Afrika Atsimo24 Aogositra 2018
Ny fitahirizana ny angovo no tena olana be ara-teknika no sady iray mibahana ny fanekena ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra, manomboka amin'ny lanjan'ny vatoaratra, ny fotoana famahanana azy. Io olana io no ilain'ilay lasitra famarotana vahàna....Mampahatsiahy zavatra anareo ve izany? Eny, ny lasitra ara-toekarena ampiasain'ny telefona finday.